» कमजोर नेताको धार्मिक राजनीतिमा किन फस्ने ?
कमजोर नेताको धार्मिक राजनीतिमा किन फस्ने ?
१० पुष २०७५, मंगलवार ०१:३८
हेटौँडा, १० पुस । नेपालको संविधानले स्पष्ट रुपमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ । यसका बावजुद पनि केही कमजोर र नकरात्मक मानसिकता बोकेका नेताहरुले मिलेर बसेका नेपाली समुदायलाई धार्मिक रुपमा लडाउन ठूलो तयारी गरेको कुरालाई अधिकांश नेपालीहरुले बुझेका छन् । राजनीति गर्ने ठोस उपाय सकिएपछि धर्मको नाममा नेपाली नेपालीलाई जुधाउने खेल खेलिरहेको देखिसक्दा पनि तिनै राजनीतिक दलका र तिनै आत्माघाती नेताहरुको पुच्छर बनेर हामी कयौँ नेपालीहरु उनीहरुको पछि लागिरहेका छौँ । वास्तवमा विश्व समुदायमा मानवता भन्दा ठूलो धर्म अरु केही छैन, यो कुरालाई हामीमध्ये धेरैले बुझेका छौँ । तर केही थान तुच्छ मानसिकता र राक्षसी प्रवृत्ति बोकेर आफ्नो स्वार्थका लागि धार्मिक युद्ध निम्ताउन खोज्ने नेता र कार्यकर्ताका कारण सकरात्मक सोच राख्नेहरु पनि आँखा चिम्लेर लम्पसार परेका छौँ । एकपटक हामी सबैले आँखा बन्द गरेर सोचौँ त, किन हामी कुनै एक व्यक्तिको स्वार्थको लागि एकअर्कासँग मारकाट गर्ने ? किन मिलेर बसेका हामी दाजुभाइ, दिदीबहिनी एकअर्काको शत्रु बन्ने ? हामी–हामी जुधेर, हामी आफै मरेर हामी कसका लागि जितको तयारी गर्दैछौँ ? यो कुराको जवाफ बुझ्नुभयो भने तपाईले धर्मको कुरा कहिले गर्नुहुनेछैन र त्यस्ता नेताहरुलाई गतिलो झापड लाईदिनुहुनेछ ।
हो, स्वभाविक रुपमा कसैले हिन्दु धर्मको वकालत गरेर राजनीति ग¥यो भने त्यो हाम्रा हिन्दु दाजुभाई र दिदीबहिनीको लागि खुशीको कुरा हो । तर किन हामी हाम्रो धर्मलाई ठूलो बनाइदिँदा मात्र खुशी हुन्छौँ ? किन अरुले मान्ने धर्मलाई सानो भन्ने र आफ्नो मान्ने धर्मलाई ठूलो मान्ने प्रवृत्ति हाबी हुनुमा हामी खुशी हुन्छौँ ? यो मानविय प्रवृत्ति हो कि राक्षसी ? हामी हिन्दुले क्रिश्चियनको बाईबल पढेका छैनौँ, मुसलमानहरुले हिन्दुको वेदपुराण पढेका छैनौँ । बुद्धिष्टले मुसलमानको कुरान पढेका छैनौँ । त्यति मात्र होईन नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य भनेर चिनाउन खोज्ने हामीहरुले समेत आफ्नै वेद पुराणलाई राम्ररी अध्ययन गरेका छैनाँै । एकपटक आत्मासाथ गर्नुस् त हिन्दु धर्म भनेर चिच्याउने तपाई हामीले आफ्नो धर्मग्रन्थ पढेका छौँ ? यदि हामी कसैको धर्मको विरोधमा बोलेका छौँ भने त्यो धर्म किन गलत छ भनेर कारण देखाउनका लागि त्यो धर्मको धार्मिक ग्रन्थलाई पढ्नुपर्छ कि पर्दैन ? तिमीहरुले मान्ने धर्मको यो कुराहरु गलत छन् भनेर भन्नसक्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यत्तिकै अरुको कुरामा लागेर जे मन लाग्यो त्यही भन्नुमा हामी आफुलाई किन बुद्धिमानी ठान्छौँ ? किन कुनै नेताको गफका भरमा मिलेर बसेका नेपाली समुदायमा फुट ल्याउने कोशिस गर्दैछौँ ? यदि कसैलाई गलत सावित गर्नुछ भने उनीहरुको विरुद्धमा ठोस प्रमाण जुटाउनुपर्छ नभए कसैलाई गलत भन्ने तपाईको मानसिकता राक्षसी हो भन्नेमा कुनै दुईमत नहोला । यसतर्फ हामीले सोच्नु जरुरी छ ।
हामीले देशको कानुन मान्नुपर्छ त्यसैले जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउन कानुन विपरित छ । तर के धर्म परिवर्तन गर्नेहरु सबैले जबरजस्ती नै धर्म परिवर्तन गरेका होलान् त ? के सबैले लोभमै धर्म परिवर्तन गरेका होलान् त ? यदि डलर बाँडेर धर्म परिवर्तन गरेको भए धर्म परिवर्तन गर्नेहरु सबै जना किन धनी छैनन् ? यस तर्फ हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । हामी सबै मिलेर बस्नुपर्छ । अरु कसैको धर्म सानो र आफ्नो धर्म ठुलो भनेर भन्न पाउँदा मख्ख परिन्छ भने त्यसमा हाम्रो पनि कमजोरी हुनसक्छ । हामीले आफ्नो कमजोरीलाई पनि सुधार्नु आवश्यक छ । हामी सबै मिलेर बसौँ, मिलेर अगाडि बढौँ, सकेसम्म एकअर्कासँग कहिले झगडा गर्नुनपरोस् र शान्ति कायम होस्, हामी सबैले चाहेको त्यत्ति होईन र ?
(साभार–समावेशी चिन्तन साप्ताहिकको पुस ८ गतेको अंकबाट सम्पादकीय)